A Letter from an 86 year old Netizen | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
« ကိုလိုနီယားနာနှင့် အဆောင်အယောင်နိုင်ငံရေး
ဘဝချင်းမတူတော့သည့် တရုတ်ပြည် »
A Letter from an 86 year old Netizen
ရှေ့တန်း ဝဲမှယာ- ဒေါ်စန်းမြ (မာမီလုံး)၊ မာမီလေး၊ မာမီကြီး
နောက်တန်း ဝဲမှယာ- ဦးတင့်ဆွေလတ်၊ ဒေါ်နုနုမော်၊ ဦးနေဝင်း ၊ ဦးကိုကိုလှ၊ ဦးမောင်မောင်ဝင့်၊ ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ ဦးသံစစ် (ဆေးပညာပရိုဖက်ဆာများ)
“History of Burma’s Medical Education”,abranch of my interest in the history of Burma’s education..
မမမြင့်အမျိုး ချက်ပြန် ကလေးဆရာဦးတင်စိုး ကြီးကြီးရေနံမြေစုတို့အမျိုးတယောက်ဆီကတဆင့်၊ ဖုန်းနဲ့မတွေ့နိုင်လို့စာနဲ့
အင်္ဂလိပ်လိုရေးရင် မာမီပြင်နေရမှာစိုးလို့ ဗမာလိုပဲ ရေးလိုက်တယ်း) နေကောင်းလား။ သိပ် အပင်ပန်းမခံပါနဲ့။ ပူလာပီ။ ဆေးရုံက စောစောပြန်ပါ။ မာမီငယ်ဘဝ ဆရာဝန်ဘဝကို စာတအုပ်ဖြစ်အောင် ရေးရင် လူငယ်ဆရာဝန်တွေ အများကြီး အကျိုးရှိမယ်ထင်တယ်။ ဆရာဝန်ရေးတဲ့ ဆရာဝန်အကြောင်း ကောင်းကောင်း မြန်မာမှာ မရှိသေးဘူး (ဦးစံကြူးအကြောင်း သူ့သားရေးတာကလွဲပီး)။
နောက်မှ စာရှည်ရှည်ရေးပါ့မယ်။ ကျနော်ရေးတာတွေ မာမီကြိုက်တယ်ဆိုလို့ သိပ်ဝမ်းသာတယ်။ မာမီသုံးတတ်တဲ့ ခွန်အားပြင်းပြင်းနဲ့ စာဖတ်သူသိချင်စိတ်ကို နှိုးဆွတဲ့အရေးပုံစံ အတွေးများများတွေးစရာပေးတဲ့စာမျိုးကို အတုခိုးရေးနေတယ်။
ဘိုဘိုလား… ဒီကလေးကိုလည်း သတိရလိုက်တာ တဲ့။
စုစုနဲ. ဘိုဘိုနဲ.က တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီတဲ့…
အင်္ဂလိပ်လိုရေးရင် မာမီပြင်နေရမှာစိုးလို့ ဗမာလိုပဲ ရေးလိုက်တယ် ဆိုတာကို ဖတ်ပြီး ဒီကောင်လေးဟာလေလို.ပြောပြီး ရီိနေလေရဲ.။
ဒါနဲ. တော်တော်ကြာကြာ တို.တွေ အာလူးဖုတ်ဖြစ်ကြတယ်၊ ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ စုံနေတာပဲ။ ကိုဘိုဘို.စာတွေ ပြီးတော့ အခု တို.တွေယူသွားပေးတဲ့ဆောင်းပါး အကြောင်းကို သူကသိပြီးသား။ ကိုဘိုဘို အခုသူ.ဆီရေးတဲ့စာကိုတော့ ဖတ်ပြီးကျေနပ်နေပါရော။
အဖွားနေကောင်းပါတယ်၊ အားတွေရှိတုန်း၊ ခေတ်မီနေတုန်း၊ စာတွေရေးတုန်း၊ စာတွေဖတ်တုန်း၊ ကူညီနေတုန်း၊ အသက်ကြီးလာတာ တစ်ခုကလွဲရင် ကျန်တာအကုန်ကောင်းတယ်။ လက်တလော အခြေအနေတွေ နိုင်ငံရေးတွေတောင် လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး ကြုံးဝါးနေတုန်း။
သူ.အကြောင်းစာအုပ်သူရေးဖို.လာပြောတဲ့သူတွေရှိပေမယ့် မရေးဘူးတဲ့၊ ဒီ့ပြင်မက ပိုပြီး အကျိုးရှိတာတွေလုပ်စရာတွေ အများကြီးလို. ပြောတယ်။ ငါနေရမယ့် အချိန်က ဘယ်လောက် လုပ်ရမှာ လုပ်ချင်တာတွေက ဘယ်လောက်ဆိုပြီး တွက်ချက်ပြတော့ တို.လည်း ဆက်မပြောရဲတာနဲ.မပြောဖြစ်တော့ဘူး။
Dear Bo Bo,
Thank you for the letter of April 28, 2011 and the article attached,apart of which, I’ve seen before, courtesy of your mother. Of course, it pleases me no end, to see all the positive attitudes of me, as put on by you. But there is another very genuine and cogent reason and that is your distinctive writing style; it’s forceful and hard-hitting, withasense of drama and immediacy and picturesque as well. You are definitelyagood writer and I like Than Yin Mar. I’m proud of you.
Right now, I’m unbelievably busy. The “Winds of Change”, blowing about currently, in Myanmar have kindled, in me, on urge to respond, apart from the routines of my two main voluntary work.
1. Support Group of Elderly Doctors (SGED) and
2. Dr.San Baw Research Committee
The former has grown in size, as I said, to something beyond my expectation and capability and the latter is, at present, engaged in the writing of, “History of Medical Education in Myanmar”. A huge undertaking involving many authors and other people for support group fortunately, I’ve Dr.Aung Than Ba Tu to help me and he is shouldering the major share of responsibilities, though he is at present abroad in the US.
Thanks for reminding me to take it easy, others have said the same. I’m seriously taking steps to phase out some of my activities substantially by the end of this year (2011).
With regards to Su Su
Filed under: family, letter	| 1 Comment
One Response to “A Letter from an 86 year old Netizen”
1 Hpoe Thar on April 30, 2011 said: